नाटक फेरि १७ गते रे « नेपाली मुटु
« ‘राजनितीमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुदैन’
नेकपा एमाले, न पोथी न भाले »
नाटक फेरि १७ गते रे
भाका सार्नको पनि एउटा हद हुन्छ नि । दुई बर्षमा नयाँ संविधान दिने भनेको एक बर्षको भाका थपियो । सेना समायोजनको त कुरा नै छाडौं । त्यो पनि पुरा हुन्छ होला भनेर धेरै नेपालीलाई विश्वास लाग्दैन, त्यै पनि भाका सरिरहन्छ । हुँदा–हुँदा सरकार तसहमतीको नभए पनि बहुमतको त भनेको समयमा नै बन्ने गथ्र्यो । अब त त्यसको पनि भाका सर्न थालेको छ । आज भएको चुनावमा न त प्रचण्ड न त रामचन्द्र पौडेल, कसैले पनि बहुमत पु¥याउँन सकेनन् । पुगोस् पनि कसरी एमाले, मधेसी दलहरु र अरु साना दलहरु रिसाएर माइत गएकी दुलही जस्ती भएर भोट नहाल्ने भएर बसेका छन् । अनि माओवादी र कांग्रेसका त आफ्ना आफ्ना उम्मेदवार छदैछन् । यसैले सबैले सोचे अनुसार आज पनि नयाँ सरकारको टुङ्गो लागेन । अब साउन १७ गते नाटकको अर्को भाग पस्किने रे । यो भाका सार्न र नयाँ नयाँ नाटक देखाउँन हाम्रा नेताहरु यत्ति सक्षम छन् कस्ले सोचेको थियो होला र ?
दिक्क भइसक्यो यो नाटक हेर्दा हेर्दा । कहिलै नसकिने र आम नागरिकलाई मनै नपर्ने यो नाटक कहिले टुङ्गिन्छ । अब त आ जो सुकै होस् प्रधानमन्त्री, कसैको बहुमत पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने भइसक्यो । तपाईलाई चै कस्तो लागिरहेको छ ? यो पढ्ने बित्तिकै कमेन्ट लेख्नुहोस् है ।
This entry was posted on July 24, 2010 at 12:08 am	and is filed under समाचार/सन्दर्भ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.